Nagarik News - संसारकै गुँड 'तिब्बत’
होमपेज / नागरिक शनिबार / संसारकै गुँड 'तिब्बत’
संसारकै गुँड 'तिब्बत’	08 Jun 2013 २५ जेष्ठ, २०७०
सुबोध गौतम	Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
छेन्दु ट्रान्जिट भएर बेइजिङ पुग्नु थियो। विमानले काठमाडौं छोडेपछि त्यसको डिस्प्ले मोनिटरमा पुग्ने ठाँउ ल्हासा पो देखाउन थाल्यो। सहयात्री मोहनप्रसाद गुरागाईले भने, ‘टिकटमै उल्लेख नभएको ट्रान्जिटतर्फ पो विमान जाँदैछ।' दुवै अक्क न बक्क । लाग्यो, ‘ठीकै छ वेइजिङ पुगेर आउने ठाँउ पनि ल्हासै हो। अरु पत्रकार साथी भन्दा पहिले हामी ल्हासा पुग्ने भयौं।' एयर चाइना ल्हासा नजिक पुग्दै थियो। पुग्नु अघिका तस्बिर क्यामेरामा कैद हुँदैथिए। त्यतिबेलाका दृश्य र तस्बिरमा फेरी अर्को कमेन्ट सुरु भयो। मोहनले भने, ‘माथिबाट हेर्दा बडो रमाइलो देखिँदो रहेछ तिब्बत।' अधिकाँस भागमा नांगा पहाड मात्र। तिनलाई सजाउने एउटा तत्व थियो–हिउँ। चुचुरा सबै हिउँले छोपिएका। निकै सुन्दर। हाम्रो भ्रमणको प्रमुख गन्तव्य तिब्बत थियो। तिब्बतमा ओर्लिएपछि के हेर्ने भन्ने चिन्ता दुबैमा सुरु भयो। जतिबेला विमान ल्हासा नजिकै पुग्दै थियो, त्यतिबेलाका दृश्यले खासै तान्न सकेनन्। छिटपुट स–साना बस्ती मात्र देखिन्थे। उजाड पहाड मात्र देखिन्थ्यो। विमानका कर्मचारीले ल्हासा ल्याण्ड गर्न लागेको जनाउ दिए। विमानस्थल बाहेक वरपर केही देखिँदैन। फेरी जिज्ञासा सुरु भो, ‘यो त हाम्रो तिब्बतको ट्रान्जिट फ्लाइट हो, पछि आएर यस्तो ठाउँमा कहाँ घुम्ने होला?' विमानका पाङग्राले रनवे छोएपछि अर्को दृश्य देखियो। त्यो के भने ‘हरियाली'। विमानमा तिब्बत छिरेदेखि नै यस्तो दृश्य देख्न पाइएको थिएन। मोहनले प्रतिक्रिया जनाए, ‘सुबोध जी, यी रुख त दुई वर्ष भन्दा जेठा छैनन।' हुन पनि ती कलिला थिए। पक्कै पनि वृक्षारोपण गरेर हुर्काइँदै थिए। ल्हासा विमानस्थलबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत प्रवेश गरियो। भिसामा इन्ट्रि स्ट्याम्प लगाइयो। र, आर्थिक रुपले चीनको तेस्रो सहरलाई अर्को ट्रान्जिट पार्न त्यसतर्फ उडियो। काठमाडौ–ल्हासाको करिब सवा घण्टा उडानपछि ल्हासा–चेन्दुको दुई घण्टे उडान सुरु भयो। फरक दृश्य र बिषयमा खासै वहस भएन, छेन्दु ओर्लिएर बेइजिङका लागि दुई नम्बर टर्मिनलतर्फ लागियो। स्थानिय समय साँझको आठ बजिसकेको थियो। अढाई घण्टा फेरी उड्नु थियो। साढे दश बजे विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र धेरै आर्थिक कारोबार हुने सहर बेइजिङको विमानस्थलमा अवतरण गर्‍यौं। राती सवा ११ बजे बेइजिङ होटल लागियो, दुई जेहेन्दार युवाका साथ। तीमध्येका एकले मलाई विमानस्थल बाहिर सोधे, ‘म कोसँग कुरा गर्दैछु?' परिचय दियौं। दश, बाह्र, चौध लेनका सडक, फलाई ओभर, गगनचुम्बी भवन, सडक किनारको हरियाली, रातको झिलिमिली बत्ती झ्वाट्ट देखिएका दृश्य यिनै हुन्। यहाँनिर एउटा डर थियो, ‘गाडीको स्टेरिङ बायाँथियो। र, चालकले सडक बायाँबाटै गाडी गुडाइरहेका थिए।’ दायाँको बानी परेका हामीलाई बायाँ गाडी कतै ठोक्किने त होइन भन्ने लाग्दो रहेछ। बायाँढोकाबाट गाडीभित्र छिर्ने बानी लागेको यात्राभर दायाँबाट चढनु पर्दा धेरै पटक झुक्कियो पनि। पत्रकारै भए पनि कुनै ठाँउ सोध्न मन लागेन। किनकी त्यसले धेरै समय खान्थ्यो। पहिले चिनियाँ, अनि अंग्रजी र नेपालीमा अनुवाद गर्दा। रात छिप्पिसकेको थियो। सुत्नु अघि ती युवाले हामीलाई तीन चार प्याकेट औषधी थमाइ हाले। यात्राका स्थानिय सहयोगी लाइमिङले भने, ‘तपाईहरु पर्सी तिब्बत घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो उच्च भूभाग हो। स्वास्थ्यमा समस्या नओओस् भनेर औषधि दिएको।' तीन–तीन वटा क्याप्सूल दिनमा चारदेखि पाँच पटकसम्म खानुपर्ने! हाम्रो सातो गयो। होइन त्यो तिब्बत कति उचाईमा छ? यत्रो औषधि खानुपर्ने। कतै माथिनै गइने त होइन भन्नेसम्मको चिन्ता भो। हामी पनि पहाडी र उच्च भूभागमा बसेका मान्छे हौं यतिधेरै औषधि खाइँदैन। कतै साइड इफेक्ट भयो भने! त्यो रात खाएनौं। स्वदेशका उच्च भू–भाग पदयात्रा गर्दा लसुन, प्याज र अदुवा जस्ता जडिबुटी झोलामा हालेर हिँडेको अनुभव थियो। तर प्लाटेउ सेफ्टी जस्ता क्याप्सूल र अन्य झोल खाएको अनुभव त थिएन। विहान खाजासँगै भारतबाट हाम्रै कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका तीन पत्रकारसँग परिचय भो। एक जनाले सोधे, 'तपाईहरुले त्यो औषधि लिनुभो? लिनुस है नत्र गाह्रो हुनसक्छ।’ मोराहरुले पनि तर्साइदिए। झोलाबाट औषधि निकालेर निल्यौं। तिब्बत उडनु एक दिन अघिको विहानबाट औषधि सेवन सुरु भयो। अर्को बिहान पाँच बजे उठाईसँगै औषधि सेवन गर्दै बेइजिङ विमानस्थल लागियो। ल्हासाका लागि 'इाइरेक्ट फ्लाइट’ रहेछ। बोर्डिङ पास लिएर छिरेपछि ज्याकिचैनका विभिन्न मुद्राका फोटा झुण्डाइएको कफी सपमा खाजा खाइयो। विमानमा ल्हासा पुग्न सवा चार घण्टा उडियो। तर यो ट्रान्जिट फ्लाइट थिएन। ल्हासा ओर्लिएर चार दिन तिब्बतमै बिताउनु थियो। मध्यान्हतिर विमानस्थल ओर्लियौं। बाहिर स्थानिय टुकडीले खादा ओढाएर स्वागत गर्‍र्यो। अब कहाँ लैजान्छन भन्ने खुल्दुली थियो। गाडीमा बस्ने बित्तिकै ल्हासाका सहयोगीले पँहेलो कागज लपेटेको सिसीको औषधि देखाउँदै भने, 'लौ यो लिनुस् स्वास्थ्यका लागि।’ हामीले भन्यौ, 'क्याप्सुल खाएर नुहुने, फेरी झोल खानुपर्ने?’ झोल खाँदैनौ बरु क्याप्सूल मात्रा बढाउँछौं भन्दै एक पटकमा तीन वटा क्याप्सूल खाँदै आएकोमा त्यहि गाडीबाट चार वटा खान थाल्यौं। तिब्बतको राजधानी ल्हासाको उचाई ३ हजार ७ सय मिटर छ। उच्च भेगमा भएकाले लेक लाग्ला भनेर औषधि खुवाइएको थियो। गाडी विमानस्थलबाट उत्तरपूर्व ल्हासातर्फ गइरहेको थियो। हाम्रो ध्यान ट्रान्जिट फ्लाइटको विमानबाट देखिएको भन्दा फरक के देख्न सकिन्छ भन्नेमा थियो। ल्हासा ५० किलोमिटर टाढा रहेछ विमानस्थलबाट। तिब्बतको विकास झल्को विमानस्थलबाटै सुरु भो। दुई लेनको चिल्लो सडक। पछि त्यो सडकसँगै अर्को दुई लेनको सडक पनि सुरु भो। यी सडकलाई केही स्थानमा करिब एक किलोमिटर दुरिसम्म सुरुङमा छिराइएको छ। सुरुङबाट फुत्त बाहिर निस्किदै ल्हासा पुगियो। ५० किलोमिटर दुरी पार गर्न एक घण्टा लाग्यो। सिधै प्राइभेट डाइनिङ रुममा छिरियो। बेइजिङको डाइनिङमा खोजेजस्तो परिकार खान नपाएका हामीलाई ल्हासा पुगेपछि केही राहत भयो। 'हेर्दा सबै मिठो होला जस्तो देखिन्छ खाँदा मसला, नुन, अमिलो र पिरो केही हुन्न, चार सय परिकार भए पनि के भो र?', मोहन डाइनिङमा छिरेपछि पटकपटक यहि भन्थे। ल्हासा र नेपालको परिकार मिल्दाजुल्दा रहेछन। खाने भन्दा पनि देखाउने चलन रहेछ। परिकारलाई प्रतिष्ठासँग जोडिँदो रहेछ। ल्हासामा पहिलो साँझ मोहनले भने, 'हेर्नुस त मेरो त नाकबाट हल्का रगत आयो।' 'क्याप्सूल नियमित सेवन गर्दा त्यस्तो भयो र', मैले सोधें। नभन्दै अर्को साँझ आफैंलाई त्यही समस्या देखियो। दुई दिनपछि आफै कम भयो। क्याप्सूल खान छाड्ने त कुरै भएन। ल्हासा वरपर उजाड पहाड। टुप्पोहरुमा हल्का हिउँ। चिसो हावा। दिउँसो तापक्रम २० देखि २३ डिग्री सेल्सियससम्म। बजार र विकास त्यत्तिकै फैलिंदैछ। पुरानो ल्हासा की नयाँ? भन्ने बेला भइसकेको रहेछ। गगनुचुम्बी भवन धमाधम बनिरहेका। औद्योगिक विकास र विस्तार त्यत्तिकै देखिन्थ्यो। नयाँनयाँउद्योग, प्राज्ञिक संघसंस्था स्थापना पनि द्रुत गतिमा। ऐतिहासिक घटनाक्रम तथा तिब्बति संस्कृतिले पनि ल्हासालाई सुन्दर बनाएको छ। पोताला दरबार, तिब्बत संग्रहालय, जोखाङ मन्दिरलगायत ऐतिहासिकस्थल भ्रमण ल्हासा पुग्नुका प्रमुख ध्यये हुन्। 'ल्हासा ल्हासै रहेछ। यी सबै कहाँदेखिन्थ्यो र ट्रान्जिट विमानबाट', मोहन भन्दै थिए। ल्हासाबाट नेपाल सीमा नजिक पर्ने तिब्बतको दोस्रो ठूलो सिगात्छे सहरको यात्रानै तिब्बत नियाल्ने एउटा राम्रो अवसर बन्यो। ल्हासाबाट तीनवटा राजमार्ग सिगात्छे पुर्‍याइएको छ। दक्षिण, मध्य र उत्तरी भेगबाट। जाँदा ३ सय ८० किलोमिटर दक्षिण राजमार्ग हँुदै सिगात्छे लागियो। र, फर्किदा दूई सय ८० किलोमिटरको मध्य राजमार्गबाट फर्कियो। यो यात्रा नै तिब्बत बुझने महत्वपूर्ण क्षण बन्यो। बीचमा लोभलाग्दा, रोचक प्राकृतिक र मानव निर्मित दृश्य देखिए। दक्षिणका हिमालको फेद हुँदै राजमार्ग लगिएको छ। गाडी भित्र बस्दा हिमाल देखेर लोभिनुपर्ने अवस्था आउँछ। राजमार्गका कतिपय ठाउँमा ठूल–ठूला ताल छन। तीनैको किनारमा राजमार्ग। पहाडको उचाइदेखि फेदसम्म पुर्‍याइएको छ। जसले यात्रुलाई हरेक क्षण आकर्षित गरिरहन्छ। गाडीबाट घुम्न मात्र तीन दिन लाग्ने ताल समेत देख्न पाइन्छ। ४०/५० किलोमिटर दुरी त ताल किनारै किनार तय गर्नुपर्छ। यात्रामै आउने उच्च भेगमा पर्यटक लोभ्याउन तिब्बतीयनहरु कुकुर र याक लिएर बसेका हुन्छन। मोहनले तस्बिर खिच्न मात्र ५६० (४० युयान) रुपैयाँ खर्च गरे। तिर्नुपर्ने २० युयान थियो, तर उनले फोटो खिच्दा जबरजस्ती सबै कुकुरलाई भेला गराइएपछि बढी पैसा तिर्नुपर्‍यो। सिगात्छेबाट ल्हासा फर्किने मध्यराजमार्ग भौगोलिक दृष्टिले जटिल मानिने पहाड छेडेर बनाइएको छ। प्रविधि पनि नौलो किसिमको देखिन्छ। ल्हासाबाट सिगात्छे आउने रेललाई पनि मध्य राजमार्गसंगै निर्माण गरिएको छ। दुई सय ५३ किलोमिटर रेलमार्ग मध्ये पुल र सुरुङ मार्गको दुरी मात्र एक सय किलोमिटर छ। यसको निर्माण लगभग पुरा भइसकेको छ। ल्हासाबाट पश्चिम लगिएका तीनवटै राजमार्गलाई बीचबीचमा आपसमा जोडन तेस्रो सडक पनि बनाइँदैछ। पछिल्लो समय हङकङबाट तिब्बतका लागि एभरेष्ट नामको रेलसेवा सुरु हँुदैछ। त्यसो त चीन सरकारले तिब्बतलाई सडक र रेल सञ्जालले भित्र पारिसकेको छ। तिब्बतलाई नजिकबाट नियाल्दा सुरुङ र पुल निर्माण चिनियाँसरकारका लागि सजिलो विकास हो जस्तो देखिन्छ। तिब्बतका सडक, राजमार्ग, रेल मार्ग र सहरभर वृक्षारोपण गरिएको छ। मानव निर्मित जंगलले हराभरा बनाएको छ। सोलार जडित सडक बत्ती र खाना पकाउन समेत सोलारका उपकरण छन्। पछिल्लो समय वातावरणमैत्री प्रविधिलाई जोड दिएको देखिन्छ। पहाड र हिमाल बीचका ठूलठूला फाँट कृषिमा प्रयोग गरिएको छ। ब्रहमपुत्रलगायत नदीहरुको पानी नहर र कुलो मार्फत सिंचाईमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। दुईतीरका हिमालबाट हिउँपग्लिएर आउने पानीनै यहाको प्रमुख स्रोत हो। कुलो पुर्‍याउन नसकिएको ठाउँमा ट्याङकरबाट पानी लगेर सिंचाई गरेको पनि देखियो। तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत कृषि हो। 'नेपालमा जाने ठूलठूला लसुन र प्याज यहिँको उत्पादन हो’, सूचना विभागका अधिकारी भन्दै थिए। खेतबारी जोत्न घोडा र याक प्रयोग गरेको पनि देखियो। घोडाको हकमा एक्लै जोत्नुपर्ने, याकको चाहिँ जोडीले। भौगोलिक वनावट, विकास निर्माण र ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक धरोहरनै तिब्बतको परिचय। सिगात्छेबाट ल्हासा हुँदै बेइजिङको 'बर्ड नेट’ हेर्न पुगियो जसलाई राष्ट्रिय संग्रहालय पनि भनिन्छ। त्यो गुँड घुमेपछि तिब्बतको विकासे तस्बिर फेरी याद आयो। सन् २००८ को आठौ ओलम्पिक भएको रंगशाला 'बर्ड नेट’को डिजाइनलाई तिब्बतको विकाससँग जोड्न मन लाग्यो। डिजाइनर आई वे वेले बनाएको 'चराको गुँड’जस्तै तिब्बत पनि सडक र रेलमार्गले जेलिँदैछ। संसारकै एउटा गुँड बनिरहेको छ। Tweet Leaveacomment Message *
सडक–समन्वयको अभावसार्वजनिक सवारीका लागि रूट परमिट जारी गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ। तर सुन्दै अचम्म, कुन रुटमा कस्ता गाडी चल्छन्, विभागलाई नै थाहा छैन। उपत्यकाभित्रका २४ रुटमध्ये धेरैमा विभागको जानकारीबेगर...	कालु हमालको सपनाकेरा बगैंचा। बगैंचाभित्र कटेज। आँगनमा लोकल कुखुरा। भुर्रभुर्र चरा। रूखमा टाँगिएका उखान तुक्का। डुंगा पोखरी। पौडी पोखरीहरू। बीचमा रेस्टुरेन्ट। क्याम्पिङ साइट। बीच भलिबल कोर्ट। छेउमा रानी कुलो। किनारमा बालुवा।	तपाईंको देशमाकुदिरहेको रेलमा तीन नेपाली छौं। रेलभरि मान्छे छन्, थरीथरीका। एसियाली, अफ्रिकी, युरोपेली आदि अनेक हुलिया बोकेका अनुहार। आत्महत्याको बीउ : मोन्सान्टोमोन्सान्टो इन्डियाको वेबसाइटमा लेखिएको छ, 'मोन्सान्टो एक कृषि कम्पनी हो। हामी नयाँ प्रविधि र आविष्कारको माध्यमबाट विश्वभरका कृषकलाई धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरी उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्दछौं।' साइटका तस्बिरहरूमा...	ट्राउट, ककनी र नुवाकोटकाठमाडौं खाल्डो गर्मीले हपक्कै छ। शीतल खोज्न टाढा जानै पर्दैन, मुड्खु पुगे हुन्छ। बालाजु बाइपास पर्तिर। नागार्जुन फेदी नपुग्दै चिसो। जितपुरफेदीदेखि नै राजमार्ग छेउछाउमा ‘जापानी रेन्बो ट्राउट' माछा बेच्ने रेस्टुँरा...	लेख्नु सजिलो छैनअघिल्लो वर्ष मो यानले नोबल पुरस्कार पाएसँगै मेरो ध्यान पनि चिनियाँ साहित्यतिर तानियो। मैले चिनियाँ साहित्य अध्ययनमा खर्चें। समकालीन चिनियाँ साहित्यमा थुप्रै भिन्न मतहरू रहेछन्। मैले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सामाजिक...	रंगिन पोखराकुमारी माछापुच्छे्र हिमालको आँगन पोखरामा पर्यटक रमाउने धेरै चिज छन्। धौलागिरि, अन्नपूर्ण माछापुच्छे्र लगायतका हिमाल। फेवा, बेगनास, रूपा लगायतका ताल। भद्रकाली, विन्ध्यवासिनी, विश्व शान्ति स्तुप, तालवाराही लगायतका धार्मिक सम्पदा। गुप्तेश्वर,...	पोखरा भ्यु–टावरदूधजस्तै सेता हिमालले पहरा दिइरहेछन् पोखरा उपत्यकालाई। धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छे्र, हिमचुली, लमजुङदेखि मनास्लु हिमालले। तीन दर्जनभन्दा बढी हिउँचुलीको चमकमा उज्यालिएको छ पोखरा। एकै थलोमा उभिएर सबै हिमाल देखिने ठाउँ बजारमा...	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...